सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनल लि. : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २२ भदौ २०७३)
२०७२/७३ आवको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्कको खुद नाफा ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत बढेको छ । बैङ्कले १०ः५.५ को अनुपातमा साउन ९ गतेसम्म हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो । बैङ्कको २३ दशमलव ८८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नसक्ने क्षमता देखिन्छ ।
मैनबत्ती चित्र : लगातार ओरालो लागिरहेको बैङ्कको शेयर मूल्य अन्तिम व्यापार दिनमा ग्रेभष्टोन डोजी आकृति बनेको छ । मूल्यको तल्लो रेञ्जमा पुगेर बनेको यस आकृतिले शेयर मूल्य प्याटर्न बुलिशमा रिभर्स हुने सङ्केत गर्दछ । यसको विश्वसनीयता न्यून/सामान्य हुन्छ ।
आरएसआई : न्यूट्रल जोन (६१ दशमलव १४ स्केल)मा छ । खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १९ दशमलव ७८ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्यरेखा र ७ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य, २१ दिने औसत मूल्यरेखा र ७ दिने मूल्य रेखा ट्रेण्ड लाइनभन्दा तल छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ६ सय ८५ मा टेवा पाउने सङ्केत देखिन्छ । मूल्य महँगिएमा रू. ७ सय ६९ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।